Fahatsiarovana ny fitroarana ho amin’ny demokrasia tamin’ny taona 1988 tany Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Fahatsiarovana ny fitroarana ho amin'ny demokrasia tamin'ny taona 1988 tany Myanmar
Voadika ny 20 Aogositra 2019 5:29 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Español, 繁體中文, Esperanto , English
Ny fahatsiarovana ny faha-31 taonan'ny fitroarana malaza ho amin'ny demokrasia tamin'ny 88 natao ny 8 Aogositra 2019 tao afovoan-tanànan'i Yangon ary nandraisan'ny mpitarika mpianatra teo aloha anjara izay tafiditra tamin'ny hetsika, ireo governemantam-paritra sy ireo mpikambana avy amin'ny vahoaka any Yangon mba hanomezam-boninahitra ireo namoy ny ainy tamin'ny famoretana nitranga nandritra ny fihetsiketsehana. Saripika sy fanazavana avy amin'i Aung Kyaw Htet / The Irrawaddy
Tafiditra ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty ary navoaka eto amin'ny Global Voices indray ny lahatsoratra navoakan'i Wei Yan Aung tao amin'ny The Irrawaddy, tranonkalam-baovao mahaleotena iray ao Myanmar. Indro ny tamberina ara-tantara fohy momba ny nialan'i Myanmar tamin'ny fitondrana miaramila sy ny fitohizan'ny tolona ho amin'ny demokrasia.
Tamin'ny 8 Aogositra 1988, nidina an-dalambe ny olom-pirenena tany Myanmar hanongana ny fitondrana sôsialista tsy refesi-mandidy an'i Ne Win izay nitondra ny firenena tamin'ny fepetra henjana nanomboka tamin'ny taona 1962.
Nitarika ho amin'ny fanonganam-panjakana mihoson-dra avy amin'ny miaramila ny hetsika – fantatra amin'ny hoe “fikomiana 88″ raha nirodana ny fitondrana .
Nanafoana ny vola taratasy 25, 35 ary 75 kyat tsy nisy fampilazana mialoha na fanonerana ny fitondran'ny Jeneraly Ne Win tamin'ny taona 1987 ary nampiasa famoretana mahery vaika tamin'ny fihetsiketsehana nataon'ny mpianatra manohana ny demaokrasia ny volana Martsa sy Jona tamin'ny taona 1988 – hetsika izay nahafeno ny kapoaka ho an'ny vahoakan'i Myanmar.
Nanambara ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina ny filoha U Sein Lwin, tànana ankavanan'i Ne Win izay nandray anjara tsy tapaka tamin'ny fanafoanana ny fihetsiketsehana am-pilaminana nanomboka hatramin'ny nanaovan'ny fitondrana miaramila fanonganam-panjakana tamin'ny taona 1962 ary nanome baiko ny hanaovana famoretana mahery vaika tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Nilaza ny gazetin'ny governemanta fa 300 no maty saingy nanombana ny loharanom-baovao tsy miankina fa impolo avo heny noho izany ny tena tarehimarika marina.
Nahazo fahefana indray tamin'ny alàlan'ny fanonganam-panjakana ny tafika, noho ny toromarika avy amin'i Ne Win, talohan'ny nanaovana ny fifidianana ankapobeny tamin'ny taona 1990, saingy tsy namindra fahefana tamin'ny mpandresy tamin'ny fifidianana, ny Ligy Nasionaly ho an'ny Demokrasia (NLD) anefa izy ireo. Latsaka indray tao anatin'ny fitondrana miaramila i Myanmar nandritra ny 20 taona manaraka, izay namolavolany ny lalàm-panorenana ho amin'ny tombontsoany manokana.
Natao indray ny fifidianana ankapobeny tamin'ny taona 2010, saingy mbola nitazona ny fahefany feno ny tafika tamin'ny alàlan'ny Antoko Mivondrona ho an'ny Firaisankina sy ny Fampandrosoana. Ny NLD, izay teraka avy tamin'ny fikomiana manohana ny demokrasia tamin'ny taona 1988 no nandresy ny fifidianana ankapobeny tamin'ny taona 2015 ary lasa antoko eo amin'ny fitondrana. Na izany aza, tsikaritry ny NLD fa mbola sarotra ny manala ny miaramila eo amin'ny tontolo politika.